5 Xirfadaha Tiknoolajiyadda Berrito Suuqgeeyaashu Waxay U Baahan Yihiin Inay Maanta Bartaan | Martech Zone
Dhowrkii sano ee la soo dhaafay, waxaa jiray isbadalo waaweyn oo ku saabsan habka aan ugu isticmaalno internetka suuq geynta dijitaalka. Waxaan ka bilownay kaliya sameynta degel illaa hadda aan ka faa'iideysano xogta iyo waxqabadka isticmaale. Tartan adag oo ka socda meesha dhijitaalka ah, lahaanshaha degelku si fudud uma jareyn doono. Ganacsatada dijitaalka ah waa inay kor u qaadaan ciyaartooda si ay uga dhex muuqdaan muuqaalka maanta isbadalaya.
Suuqgeynta adduunka dhijitaalka ah aad ayey uga duwan tahay suuqgeyntii soo jireenka ahayd ee aan ku baran jirnay. Hal-abuurnimadu weli waa xirfad lama huraan ah; hase yeeshe, dammaanad kama qaadayso guushaada. Waxaa jira dhowr qalab, xirfado, iyo codsiyo aad u baahan tahay inaad ogaato si aad maanta ugu guuleysato suuq-geyn guuleysta.
Iyadoo taas maskaxda lagu hayo, waxaan soo taxnay shan xirfadood oo qasab ah inay kaa caawiyaan inaad ka booddid kanaga xirfadeed ee suuq-geynta dijitaalka ah.
Dhiciyaan Search Engine
Raadinta makiinadaha sida Google iyo Yahoo waxay kaa caawinayaan wadista taraafikada boggaaga oo waxay kuu oggolaaneysaa macaamiisha mustaqbalka inay si fudud kuu helaan. Adoo yeelanaya aasaas adag sida SEO shaqeeyaa, waxaad abuuri kartaa olole suuqgeyn gaar ah oo hagaajin kara muuqaalka boggaaga ee matoorada raadinta.
SEO sidoo kale waxay saameyn ku yeelan kartaa dhaqanka isticmaalaha. Tusaale ahaan, adeegsadayaashu waxay u badan tahay inay riixaan degellada laga helo bogga koowaad ee natiijooyinka raadinta. Markasta oo aad sare ugujirto natiijooyinka raadinta, ayaa sifiican ugu soo gaadheysa macaamiisha mustaqbalka.
Marka si lagaaga caawiyo inaad fahamto aasaaska SEO, waad aqrin kartaa tan Hagaha Bilowga soo dhigay Google. Waa hordhac weyn SEO.
Mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee lagula socdo loona qiimeeyo horumarkaaga suuqa waa xogta Analytics. Maalmahan, waad falanqeyn kartaa dhaqdhaqaaqa macaamilka iyo sidoo kale waxa ay rabaan ama sida ay dareemayaan wax soo saar gaar ah. Natiijo ahaan, ololeyaasha suuqgeynta iyo istiraatiijiyadda waxaa saameyn weyn ku yeeshay falanqaynta xogta.
Falanqaynta xogta ayaa suurto galisay in lala socdo safarka macaamilka, laga bilaabo marka ay gujiyaan bogga si ay ugu dambaynta wax uga iibsadaan isla shabakada. Taas, adigoo og sida loo isticmaalo qalabka falanqaynta xogta (tusaale Google Analytics, Adobe Analytics, Hubspot, iyo wixii la mid ah) waxay noqotay shuruud looga baahan yahay suuqyahan kasta oo dijitaal ah maalmahan.
Horumarinta UX iyo UI
Khibrada Isticmaalka (UX) iyo Interface User (UI) waxay si weyn gacan uga geysataa sii-haynta macaamiisha.
Horumarinta UX waa khibrada guud ee isticmaaleyaasha iyo sida ay ula falgalaan websaydhka / arjiga; halka UI uu yahay dareenka guud ee websaydhka / arjiga, curiyaha muuqaalka iyo qaabdhismeedka.
Si wada jir ah, waxay u qabtaan una ilaaliyaan dareenka isticmaalayaasha websaydhka ama arjiga. Shirkadaha ganacsiga E-commerce sida Amazon waxay si weyn u maalgashadaan UI iyo UX horumarinta si kor loogu qaado heerka beddelashada loona kordhiyo iibka internetka. Marka wax la yaab leh ma ahan sababta ay baahida sii kordheysa u qabaan naqshadeeyayaasha UX iyo UI.
Luqadda Koodhka Aasaasiga ah
Barnaamijku waa mid ka mid ah xirfadaha dhammaystirka ee ugu fiican suuq kasta oo dijitaal ah. In kasta oo aanad lahayn farsamadan ama si ka sii qoto dheer xirfadda sireed, ogaanshaha aasaasiga ayaa asal ahaan kaa caawin doona muddada-dheer.
Markaad fahanto aasaaska barnaamijyada, waxaad la yeelan kartaa wadashaqeyn wax ku ool ah kooxda horumarka. Waxaad si fudud ugu guuleysan kartaa yoolalkaaga suuq-geynta maxaa yeelay waxaad awood u leedahay inaad si cad ula xiriirto iyaga. Taas ka sokow, waxaad awoodi doontaa inaad tilmaamto oo aad u soo jeediso talooyin wax ku ool ah kooxda horumarka sidoo kale.
Koodhistu waa aqoon-akhris cusub oo muhiim ah. Da 'kasta oo aad tahay ama warshad kasta oo aad ku jirtid, marna ma aha goor hore ama goor dambe in la barto. Xirfadahaaga koodhku had iyo jeer way ku anfacayaan, gaar ahaan tan iyo markii ay sii kordhayaan ganacsiyada internetka ka socda.
David Dodge, Naqshadeeyaha Ciyaaraha, Qoraaga, Aqoonyahan, iyo Maamulaha Codakid
Nidaamka maaraynta waxyaabaha
Maareynta Maareynta aad ayey muhiim ugu tahay adduunka dhijitaalka ah. Marka la eego taas in ka badan kalabar boggaga internetka oo dhan waxay adeegsadaan CMS, layaab malahan sababta ay qalab muhiim ah ugu tahay suuq kasta oo dijitaal ah.
CMS waxay ka caawisaa suuqleyda inay si hufan u shaqeeyaan, laga bilaabo si joogto ah u cusbooneysiinta degel illaa soo dejinta waxyaabaha cusub. Waxay toosineysaa socodka shaqada waxayna u oggolaaneysaa suuqleyda dijitaalka ah inay wax soo saaraan oo ay wax badan ku guuleystaan ​​waqti yar. Maaddaama maadooyinka ay inta badan gacan ka geystaan ​​qiimeynta SEO, ganacsiyada badankood waxay dhexgalaan CMS boggooda.
Si taas loo gaaro, adoo aqoon u leh barnaamijyada kala duwan ee CMS (tusaale WordPress, CMS Hub, Squarespace, iyo wixii la mid ah) faaiido ayey noqon doontaa. Taas ka sokow, waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa barnaamijyadan si aad u abuurto faylalkaaga suuq-geynta iyo sidoo kale inaad muujiso aqoonta aad u leedahay CMS ee loo-shaqeeyeyaasha mustaqbalka.
Tags: xirfad suuq geynta dijitaalka ahshaqo suuqgeynshaqooyinka suuqgeyntabarnaamijyadaSEOXirfadaha Techxirfadaha farsamadauxWordPress
Sidee Mashiinnada Goobiddu u Raadiyaan, u gurguurtaan, oo u muujiyaan Mawduucaaga?